Xubno ka tirsan Al-Shabaab oo howlgal lagu soo qabtay - Caasimada Online
Home Warar Xubno ka tirsan Al-Shabaab oo howlgal lagu soo qabtay
Xubno ka tirsan Al-Shabaab oo howlgal lagu soo qabtay
Afgooye (Caasimada Online) – Faah faahino dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa howl-gal ay ciidamada Xoogga dalka ka fuliyeen qeybo ka mid ah gobolka Sh/Hoose.
Howl-galka oo ahaa mid qorsheysan ayaa si gaar ah uga dhacay deegaanada Maguurto, Gumarrey, Kaxarrow, Doonka Weynow, Doonyarow, Cadeyley, Lafagaale & Cumar Dheere oo dhamaan ka wada tirsan gobolka Shabeelaha Hoose ee koonfurta Soomaaliya.
Saraakiisha hoggaamineysay howl-galka ayaa shaaca ka qaaday in bartilmaameedka uu ahaa goobo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab.
Sidoo kale saraakiisha ayaa tilmaamay in howl-galkaasi ay ku soo qab-qabteen illaa 18 xubnood oo Al-Shabaab u qaabilsanaa dhanka aasida qaraxyada miinooyinka.
“Muhiimada howl-galka waa in baaritaan lagu sameeyo Tuulooyinka ay ku dhuumaaleysanayaan argagixisada si loo baabiyo miinooyinka ay galiyaan waddada isku xirta Tixsiile iyo Afgooye,” ayuu yiri Cabdalla Mustafe taliyaha ciidanka howl-galka fuliyey.
Ugu dambeyn saraakiisha ka warbixiyey howl-galka ayaa xusay inay sii wadi doonaan dhaq-dhaqaaqyadooda ka dhanka ah dagaalyahanada Al-Shabaab.
Inta badan xoogaga Al-Shabaab oo weli ku xoogan Sh/Hoose ayaa weeraro iyo qaraxyo ka fuliya deegaanadaas gobolkaasi oo ay howl-gallo ka wadaan ciidanka huwanta.